सर्वोच्चको फैसला आएलगतै संकटकालको घोषणा, सेना परिचालन गर्न अन्तिम तयारी ! - Nepali in Australia
June 22, 2021 autherLeaveaComment on सर्वोच्चको फैसला आएलगतै संकटकालको घोषणा, सेना परिचालन गर्न अन्तिम तयारी !
काठमाडौं – नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान धारा ७६ को दफा ५ को ठीक ढंगले उपयोग नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले संसद् नै भंग गर्ने काम भएको भन्दै आ-पत्ति जनाएका छन् । उनले आफूहरुले कानून र विधिसम्मत ढंगले अघि बढ्ने बताउँदै आएकोले राष्ट्रपतिको आदेश बदर गर्नुपर्छ भनेर अदालत गएको पनि स्मरण गराए ।
आज राति प्राइम टाइम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अदालतले संविधान र कानूनमा टेकेर निश्पक्ष र स्वतन्त्र फै-सला दिनेमा जनता आशावादी रहेको सुनाए ।
उनले संसद् पूनःस्थापना हुने विश्वास दिलाए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन गर्नको लागि भनेर मिति घोषणा नगरेको पनि पनि दाबी गरे । उनले अहिले प्रणाली सिध्या-उनको लागि षड्य-न्त्र गरिएको गम्भी-र आरो-प लगाए ।
प्रधानमन्त्रीले संविधान अव-रुद्ध गर्न चाहेको पनि उनको अर्को आरो-प छ । उनले भने-“अब उहाँहरुको प्लान अथवा रणनीति हेर्दाखेरि र अबको स्टेप हेर्दाखेरि संसद् भंग गरिदिने, संविधान अव-रुद्ध गरिदिने, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशबाट देश चलाउने, अहिले त्यो दिशातर्फ गैरहेको छ । सके संकटकाल लागु गरेर चाहीँ सेना पनि परिचालन गर्ने, नसकेपनि राष्ट्रपतिमार्फत जबरज-स्ती रुपले बल प्रयोग गरेर संविधान सिध्या-उने, र यो दिशातर्फ जाँदैछ ।”
भुतपुर्व र वर्तमान कार्यरत सिपाही, मेजर, कर्णेल, रथी, उपरथी, प्रधानसेनापति, रेन्जर र कमान्डो सेनाहरुलाई म राकेश कुमार शर्माको चिट्ठी ।सैनिक संगठनमा अवकाश प्राप्त सेनाहरु पनि जीवित रहुन्जेल सम्म अवकाश प्राप्त भएको मानिदैन से-नाहरुले महसुस गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
मुलुकको श-क्ति नै सेनाहरु हो । मुलुक भन्दा ठुलो नेताहरू र विक्रम सम्वत २०७२ साल जारी संविधान होइन । संविधान फेरि पनि बनाउन सकिन्छ । यसकारण मुलुकमा अब तत्काल सै-निक शास-न चाहिएको छ । मुलुक असफलता तर्फ गइरहेको अवस्था छ समयमा सेनाहरुको ध्यानाकर्षण होस ।
सेनाहरु चुप किन ? से-नाहरु मुकदर्शक किन ? अब से-ना आउ नेताहरूको शा-सन बाट पार लगाउनुपर्छ । अब सेना आउ नेताहरुको शा-सन बाट मुक्त गराउनुपर्छ ।
सेनाहरु प्रजातान्त्रिक ढंगले कसरी अघि बढने भन्ने बारे म संग विस्तृत योजनाहरु र दीर्घकालीन दुरदर्शि सोच छ । को-रोना भाइ-रस सं’क्रम-णको म’हामारीमा नेताहरूलाई सत्ताको लागि हा-नथाप र राजनीतिक गर्दैमा फुर्सद छैन । कोरोनाको म’हा-मारीमा जनताहरुको स्वास्थ्य सँग खेल-वाड भइरहेकोे छ ।
सरकार र नेताहरूले आफुले केही गर्न नसके पनि मुलुकमा संक-ट परेको समयमा क-कसलाई परिचालन गर्नुपर्ने हो ? छिटो भन्दा छिटो औषधि र खो-पहरु कसरी झिकाउने औ-षधि, खो-पहरुको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने बारे सरकार र नेताहरू संग को-रोना भाइ-रस सं’क्र-मणको म’हा-मारीमा प्रभावकारी ठोस योजना नै छैन । जिम्मा दिइयो र जिम्मा लगाइयो भने कमि-सन खान र कालोबजारी गर्न पाइन्न कि भन्ने मात्र चि-न्ता छ ।
मुलुकमा दोस्रो चरणको को-रोना भाइ-रस सं’क्र-मण फैलिएको ड-र र त्रा-सको अवस्था छ । मुलुक दोस्रो चरणको को-रोना भाइ-रस सं’क्र-मण म’हा-मारीको सं’क-टको समयमा नेताहरूको बीच सत्तालाई लिएर सत्ता स्वार्थ, खेल, मोहको झै झगडा सत्ता जोगाउने र ढा-ल्ने खेल भइरहेको छ । मुलुकको विगतको घट-नाक्रम र हालको वर्तमान परिस्थिति बारे से-नाहरु स्वयंलाई नै थाहा छ कोही पनि से-नाहरु अनभिज्ञ हुनु होला जस्तो मलाई लाग्दैन । मुलुकमा राजनीतिकको आडमा घि-न लाग्दो कार्य भएको अवस्था छ । नेताहरूले नाटकीय चित्रण प्रस्तुत गरिरहेका छन । से-नाहरुले पनि नेताहरूको नाटक मंचन र नाटकीय चित्रण हेरी रहनु भएको होला । से-नाहरु चुप किन ?
विक्रम सम्वत २०६२/०६३ सालपछि नेताहरूले मुलुकलाई निकास दिन सकेनन । यसप्रकार नेताहरू असक्षम र अस-फल साबित भएका छन । मुलुकमा को-रोना भा-इरस सं’क्र-म-णको म’हा-मारीमा दैनिक ज्यालादारी गरेर दिनदिनै गुजारा गर्नेहरुको लकडाउनमा कतिपयको घरहरूमा चुल्हो नबल्ने आदि इत्यादि अवस्था पनि छ । पहिलो चरणको को-रोना भाइ-रस सं’क्रम-णमा पनि खाद्यान्न सामग्रीहरुमा व्यापक कालोबजारी र महँगी बढाइएको थियो । खाद्यान्न सामग्रीहरु र ग्यासहरु लुकाइएको थियो । दोस्रो चरणको लकडाउनमा सोही प्रक्रिया यथावत अपनाइएको छ।
बिरा-मीहरु अस्पतालहरुमा समयमा भर्ना, उपचार, भेन्टिलेटर र अक्सिजन नपाएर मृ-त्यु भएको अवस्था छ । केही औषधि पसलेहरुले को-रोना भाइ-रस सं’क्र-मणको नक्कली औषधिको बढी मुल्य लिएर बे-च्ने गरेको कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ । मुलुकमा ल्याउने खो-पहरुमा पनि कमि-सनको कुरा आएको सुनिएको छ । मुलुकमा बि-जोग छ बि-जोग अवस्था । सेनाहरु चुप किन ?
कोरोना भाइरस सं’क्र-मण म’हामारीको भ’या-वह र ज-टिल अवस्थामा नेताहरूको बीच सत्तालाई लिएर पटकपटक कहिले बालुवाटार त कहिले शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूको निवास, पार्टी कार्यालय, रिसोर्ट, पार्टी प्यालेस र सुविधा सम्पन्न होटलहरुमा बैठक बस्ने गरेकोछ । कोरो-ना सं’क्रम-णको म’हामारीमा नेताहरुको मो’जम-स्ती छ । नेताहरूलाई सत्तामा भएको मजा बेग्लै छ । सत्तामा भएपछि सेवा सुविधाहरू थुप्रै लिन पाइन्छ, चाकरी पाइन्छ, रातदिन प्र-हरी, सश-स्त्र प्रह-री र सेनाहरुको सलाम खान पाइन्छ । मुलुकको ढुकुटीको साँचो आफ्नो हातमा हुन्छ । ढुकुटी रित्याउन पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरू भ्रमण लगायतका सेवा सुविधाहरु उपलब्ध हुन्छ ।
मुलुकमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट र जसपा लगायतका दलको सरकार फेरबदल भएपनि के.पी.शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल जोसुकै प्रधानमन्त्री बनेपनि मुलुकले यिनीहरू बाट निकास पाउने छैन ढुक्क हुनुहोस । नेताहरूको आजसम्मको क्रियाकलाप र नाटक मंचन देखि सकियो । नेताहरूको लागेको बानी कहाँ हराउँछ र ? सरकार फेरबदल र परिवर्तन भएता पनि फेरि फेरि केही समय पश्चात नेताहरुको नाटक मंचनको प्रक्रिया शुरुआत हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । मुलुकले नेताहरूबाट सहजै निकास पाउने अवस्था देखिदैन । यसकारण अब मुलुकमा तत्काल सै-निक शासनको आवश्यकता छ ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र भारत, अमेरिका, चीन र रुस लगायतका मुलुकलाई भनिन्छ । हाम्रो मुलुकमा नेताहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा लुटने मात्र काम गरे । संघीयता भारत, अमेरिका, चीन र रुस लगायतका विशाल मुलुकको लागि ठिक छ । हाम्रो मुलुक बिहार राज्यको पटना ज-त्रो सानो छ । हाम्रो मुलुकको लागि संघीयता अफाब छ । संघीयताले मुलुकको भार थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।
विक्रम सम्वत २०६२/०६३ सालपछि नेताहरूको कारण मुलुकको स्वाधीनता धरा-पमा परेको छ । नेताहरूले मुलुकलाई निकास दिन सकेनन । मुलुक दिन प्रतिदिन असफलता तर्फ गइरहेको छ । मुलुक दु-र्घट-नामा पर्न गयो भने सबैजना पर्ने हो यो कुरालाई से-नाहरुले पनि मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण मेरो भनाइहरु तर्फ सेनाहरुको ध्यानाकर्षण होस अनुरोध छ ।
लेबनान, सिक्किम, फिजी, सोमालिया, अफगानिस्तान, सिरिया, सुडान, हाइटी र रुवाणडा मुलुकहरू के कति कारणले द्व’न्द्वग्र-स्त र द्व-न्द्वमा पर्न गएको हो त्यतातिर पनि सेनाहरुको ध्यानाकर्षण र विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।
झापामा तीनवटा सवारीसाधन ठो’क्किँदा दुई जनाको मृ’त्यु, ४ जनाको अबस्था चि’न्ताजनक